बोटनेट संक्रमण: तपाइँ यस मुद्दाको बारेमा के जान्नुहुन्छ? - Semalt सल्लाह र युक्तिहरू
बोटनेट, जसलाई बोट नेटवर्क वा जोम्बी सेना पनि भनिन्छ, संक्रमित कम्प्युटरहरूको एक ठूलो नेटवर्क हो। मालवेयरले यी कम्प्युटरहरूलाई हाइज्याक गर्दछ र हमला गर्नेहरूको इच्छालाई काम गर्दछ। तिनीहरू सयौंदेखि हजारौं कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूमा नियन्त्रण गर्न कल गर्छन्, र botnets सामान्यतया संगठनहरूमा स्पाम, भाइरस, र मालवेयर पठाउन प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू व्यक्तिगत जानकारी चोर्न र DDoS आक्रमणहरू मद्दत गर्न पनि सहयोग गर्दछ। ज्याक मिलर, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन कि botnets एक प्रमुख अनलाइन खतरा मध्ये एक मानिन्छ र सकेसम्म चाँडो हटाउनु पर्छ।
Botnets कहाँबाट आउँछ?
बोटनेटको अंश बन्नको लागि, कम्प्युटरले विशिष्ट मालवेयर वा भाइरसद्वारा संक्रमित हुनुपर्दछ कि जसले नेटवर्कमा हटाउने सर्भर वा अन्य संक्रमित कम्प्युटरहरूमा सम्पर्क गर्दछ। ती तपाईंको उपकरणको नियन्त्रण लिन चाहन्छन् र उनीहरूको विशेष कार्यहरू गर्नको लागि ह्याकरहरूबाट निर्देशन पठाउन प्रयोग गरिन्छ। ह्याकर्स र अपराधीहरूले प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र बोटनेटको मद्दतबाट अन्य जानकारी चोरी गर्दछन्। बोटनेट मालवेयर संक्रमण परम्परागत मालवेयर संक्रमण भन्दा फरक छैन।
हामी कसरी बोटनेट्स चिन्न सक्छौं?
हामी सजिलैसँग बोटनेट्स चिन्न सक्दछौं जब हाम्रो कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणहरू एउटै तरीकाले संक्रमित हुन्छन्। तपाइँको कम्प्युटरमा संक्रमित भएको स The्केतहरूले तपाइँको कम्प्युटरको ढिलो चालू, अनौंठो ईमेलहरू, अनौंठो कार्यहरू, त्रुटि सन्देशहरू, र फाइलहरू राम्रोसँग खोल्न असमर्थ समावेश गर्दछ। यी सम्भावित लक्षणहरू छन् कि कोहीले तपाईंको डाटा चोरी गर्न कोशिस गरिरहेको छ र तपाईंको कम्प्युटरलाई बोट नेटवर्कको भागको रूपमा टाढाबाट अपहरण गरेको छ। यदि तपाईंको कम्प्युटर प्रणाली ढिलो हुन्छ भने, तपाईं बोटनेटको सिकार हुन सक्नुहुन्छ।
कसरी हाम्रा कम्प्युटरहरू बोटनेटबाट बचत गर्ने?
हामी हाम्रा कम्प्युटरहरूलाई बोटनेट नेटवर्कहरूबाट केही एन्टि-द्वेषपूर्ण वा एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरू स्थापना गरेर हटाउन सक्छौं जुन हाम्रो उपकरणहरूबाट सकेसम्म धेरै बोटहरू हटाउन सक्दछन्। उत्तम तरिका भनेको नियमित रूपमा हाम्रो कम्प्युटरहरूमा एन्टिभाइरस स्क्यानहरू चलाउनु हो। तपाईं एन्टि-बोटनेट उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंको प्रणालीबाट तत्काल मालवेयर हटाउँछ।
बोटनेट मालवेयर रोक्नको लागि उत्तम र सजिलो तरीका:
तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा एक विश्वसनीय र शक्तिशाली एंटीवायरस प्रोग्राम स्थापना गर्नुपर्छ
तपाईंले सफ्टवेयर सेटिंग्स सेट गर्नु पर्छ
तपाइँले सावधान हुनुहोस् जब के खुला हुन्छ वा इन्टरनेटमा केहि क्लिक गर्नुहोस्
कम्प्युटरहरूलाई बोटनेट सेनामा जोम्बी हुनबाट जोगाउन, तपाईंले शicious्कास्पद प्रोग्रामहरू र फाइलहरू डाउनलोड गर्नबाट अलग रहनु पर्छ। साथै, तपाईंले अज्ञात लिंकमा वा क्लिक नगर्नु हुँदैन वा ईमेल संलग्नकहरू जुन तपाईं परिचित हुनुहुन्न। सँधै याद राख्नुहोस् कि यी सबै चीजहरूमा बूटहरू हुन सक्छन् र तपाईंको उपकरणहरूमा संक्रमित गर्न त्यहाँ छन्। साथै, तपाईंले आफ्नो ब्राउजरहरू, विन्डोजहरू, र एन्टिभाइरस कार्यक्रमहरू अपडेट राख्नु पर्छ र तपाईंको सुरक्षा प्याचहरूको गुणस्तर र अपडेटहरूमा नजर राख्नु पर्छ। तपाईंको उपकरणलाई शक्तिशाली एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरू जस्तै अवास्ट एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको साथ सुरक्षित गर्नुहोस्। यसले तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणलाई मालवेयर, बोटनेट्स, र भाइरसहरूद्वारा संक्रमित हुनबाट बचाउँदछ।